तपाईलाई थाहा छ, मानिसको अ'न्तिम संस्कारमा महिलाहरु किन लगिदैन् ! - Filmy News Portal Of Nepal
तपाईलाई थाहा छ, मानिसको अ’न्तिम संस्कारमा महिलाहरु किन लगिदैन् !
हिन्दु धर्मको परम्परा अनुसार, मृ त शरीरलाई ज’लाउने बेला महिलाहरूलाई म’लामी लानुहुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, किन थाहा छ ? आजको यस धर्मको अङ्कमा, हामी तपाईँहरूलाई प्राचीनकालमा महिलाहरूलाई किन म’लामी लान्थेनन् भनेर केहि का’रणहरूको जानकारी दिन गैरहेका छौँ ।
महिलाहरूले विशेष गरी घर-घरायसी काम गर्ने र पुरुषहरूले घरबाहिरको काम सम्हाल्ने अधिकांस घर परिवारमा चल्दै आएको प्रथा हो । यो प्राचिन समयमा देखि नै यसैगरि च’ल्दै आएको छ । समय बि’त्दै जाँदा यो नै परम्परा अनि संस्कृति बन्यो । घरायसी काम महिलाले र परिश्रम पनि बढी पर्ने अनि घर बाहिरका काम पुरुषले गर्ने चलन बन्यो ।
यसरी नै मलामी जाने पनि पुरुष मात्रको कामको रुपमा चिनिदैँ, गरिदै आयो । महिला मलाली जानु हुन्न वा पुरुष मात्र मलामी जानु पर्ने कहिकतै शास्त्रमा स्पष्ट उल्लेख भेटिँदैन । बिना कारण केवल प्रथा चल्दै आएकाले नै महिला मलामी जान हुन्न भन्ने विश्वास गरिन्छ। प्राचीन कालमा भने महिलालाई मलामी नलानुका कारणहरू यस्ता थिए :
१. आ’गोको धूप : प्राचीन दिनहरूमा, पुरुषहरूले ला सलाई घा’टमा लगेर ज लाउँदै गर्दा महिलाले घरको कामधन्ना भ्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । साथै, घा’टमा गएर फर्केका मलामीहरू घर फर्किएपछि आ’गोको धूपले चोख्ख्याउनुपर्ने हुन्थ्यो र त्यसैलाई तयार पार्नको लागि महिलाहरू घरमै बस्ने गर्दथे ।
२. ड’रला’ग्दो दृश्य : ला स ज’लाउने काम क’मजो’र मुटु भएकाले गर्ने काम होइन । अघि भर्खरसम्म जि’उँदै देखेको मानिसलाई अहिले ज लाएको हेर्नुपर्दा जस्तो सुकै क’ठोर मन पनि भ’क्कानिन्छ । यस्तो भ’यानक दृश्य महिलाहरूले हेर्न सक्दैनन् भनेर पनि पहिले-पहिले महिलालाई म’लामी पठाउँथेनन् ।
३. ला स ज’ल्ने समय : हिन्दु धर्मअनुसार, कुनै पनि मानिसको अ’न्तिम संस्कार गर्दा शरीरलाई पुरैरूपमा ज’लाउनुपर्दछ । कसैको शरीर त केहि घण्टामै ज’ल्दछ भने कसैको निकै समय पनि लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा घरमा बालबच्चा अनि गाईवस्तुको हेरचाह गर्नुपर्ने हुनाले पनि त्यतिबेला महिलाहरूलाई घरमै राख्ने गर्दथे ।
४. भूतको डर : म’सानघा’टमा त’ड्पिएर बसेका आ’त्माहरूको (भू’त) उपस्थिती हुन्छ भनेर विश्वास गरिन्थ्यो, गरिन्छ । यस्ता ‘भूत’ले कमजोर हृदय भएका महिलाहरूलाई आ क्रमण गरेर शरीरलाई अधीनमा लिन्छन् भन्ने पनि विश्वास गर्दै आइएको छ । विशेष गरी कुमारी केटिहरूलाई यस्ता भू’तले बढि रुचाउने पनि विश्वास गरिन्छ । त्यसैले पनि म’सानघा’टमा महिलाहरूलाई जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
५. संस्कार : ‘आँशु’ले आ’त्मा’को बाटो छेक्छ। हिन्दु धर्मको संस्कार अनुसार यस्तो पनि विश्वास गरिन्छ । म रेको मान्छेको अन्तिम संस्कार गरिसकेपछि मात्रै आ’त्माले बिदा पाउँदछ र यदि त्यहाँ एकथोपा पनि आँशु खस्यो भने त्यो आ’त्मा सँधै त्यहिँ अ’ड्केर बस्दछ । महिलाहरूले सजिलै आफ्नो आँशु रोक्न सक्दैनन् भन्दै म’सानघा’टमा प्रवेश नि’षेध गरिएको थियो ।
प्रथा र संस्कृति समय अनुसार परिवर्तन गरिनु आवश्यक हुन्छ । परिवर्तन गर्दा सहज अनि अर्थ बोक्ने प्रथा जरुरी हुन्छ । नत्र प्रथा रुढीवादी हुन्छ, काम नलाग्ने हुन्छ अनि प्रथा र संस्कृतिको अर्थ अ’र्थ्याउन नसक्दा त्यो प्रथामा चलिरहनुको कुनै अर्थ रहदैन । अर्थ जानौँ, ठिक बे’ठिक, आवश्यक अ’नावश्यक संस्कृति छु’ट्याउन सकौँ । एजेन्सी ।